သက်ဝေ: T for Thet Wai
(Omg.. so heavy)
mae October 9, 2009 at 4:26 AM
mm မမသက်ဝေကို လာကျူသွားပါတကားး
tag ကြီးက အနော်လဲ ပါတယ်ထင်တယ်၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာ.. အဟတ်
khin oo may October 9, 2009 at 6:11 AM
Hmoo October 9, 2009 at 12:31 PM
U all right? :)
take care....naw :)
Waing October 9, 2009 at 12:34 PM
အရောင်ထဲမှာ Tourquoise ဆိုတာ ဘာလဲဟင် မသက်ဝေ မသိလို့ပါ
SDL October 9, 2009 at 2:02 PM
A reason for being late ကိုကြိုက်တွားဘီ... ကွိကွိ...
waing ပြောတာ ညီမလည်း မသိဘူး...
သက်ဝေ October 9, 2009 at 8:30 PM
မွန်... သူက တော်တော်များ ဝ နေလို့လားဟင်...
မေ.. မေ့ ဘလော့ဂ်မှာ ဓါတ်ပုံတွေ သွားကြည့်ထားတယ်... စာလဲရေးပါ မေရဲ့...
Tag ထားတာလဲ ရေးတော့လေ...
မမ.. ဟင်း.. ဆင်ခြေတွေ... ဆင်ခြေတွေ... သိတယ်နော်...
အမြဲတမ်း လာလည်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဝိုင်း နဲ့ စင်စင်...
Tourquoise ဆိုတာ စိမ်းတိမ်းတိမ်း ပြာတာတာ အရောင်ပါ...
စင်စင်... A reason for being late ကတော့ တကယ်ကြီးပါ... သူ့အကြောင်း စဉ်းစားမိလို့ကတော့ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ အရာရာမေ့... အားလုံးမေ့... အားလုံးနောက်ကျ... အားလုံး ကမောက်ကမပါ... ဟဲဟဲ
ဟုတ်လား... ပြောဘူး...း))
Rita October 10, 2009 at 12:22 AM
my comment for this post: the best
Anonymous October 10, 2009 at 9:12 AM
thought is notaverb. think isaverb.
Soe October 10, 2009 at 10:36 PM
Too above comment...
Think.. Thought... Thought...
Thought is past tense of Think, it'saverb too.
သီဟသစ် October 11, 2009 at 4:15 PM
The Lover’s Lane @ R I T
အဲဒီလမ်းလေးကို ဓါတ်ပုံရှိရင် တင်ပေးပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ တွဲပြီးတော့လေ။
nu-san October 12, 2009 at 12:24 PM
မြန်မာလိုရေးထားတာ ပိုရီရတယ် မမသက်ဝေရဲ့.. သွား... လူဆိုးးးးးးးး... :D
sonata-cantata October 12, 2009 at 1:24 PM
E လိုပဲ ရေးထားတုန်းက မန့်မတတ်လို့ ပြန်သွားတာတော့...
အခုမှ လာပြီလာပြီ ဒေါ်သက်ရီ
(ဟယ်! ယောင် လိုက်တာတောင် သ for သက်၊
T for Thet ပါသွားပြီ)
rose of sharon October 12, 2009 at 9:50 PM
တန်ခူး October 14, 2009 at 1:08 PM
မခင်မင်းဇော်တက်ဂ်ထားတာ တီ တီချင်း မို့ လာအတုခိုးတာ… ခက်တယ်နော်…
တီကို သက်ဝေဆီက copy and paste လုပ်လိုက်မှ ထင်တယ်… ဟိဟိ…
Moe Cho Thinn October 16, 2009 at 9:35 AM
မမ မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ အလုပ်တော့ ကြိုက်သွားပြီ။ စနိုက်ပါ ဆို ပိုမိုက်မယ်။
မမရဲ့ နောက်ကျရခြင်းအကြောင်းရင်းက သနပ်ခါးလေး လိမ်းပြီးရင် ကိုယ့်အကြောင်းတွေးနေပေါ့ကွယ် ပေါ့ ဟုတ်လား။ :))
Yu Wa Yi October 17, 2009 at 2:18 AM
စာလာဖတ်တာ အစ်မသက်ဝေ။ ဘလော့ပျောက်နေလို့ အနည်းလိုက်ရှာလာရတာ :D
Yu Wa Yi October 17, 2009 at 2:19 AM
မနည်းလိုက်ရှာလာရတာလို့ ပြောတာပါ။ လင့်ခ်က ဘာအဆင်မပြေမှန်းမသိဘူး။ ပြန်ပြင်လို့ လည်းမလွယ်နဲ့ လေ။